GRANNY SMITH TUFAAX: KALOORI IYO MEESHA AY KORAAN, SHARAXAADDA KALA DUWAN IYO FAA'IIDOOYINKA, SAWIRADA - BEERTA
Tufaax kala duwan "Granny Smith" Sababtoo ah sifooyinkaas, waxay ka heshay caan ka mid ah beeraleyda, boorsooyinka iyo hudheelka adduunka oo dhan.
Geedaha kala duwan qabow qabowsoo qaado dalag goosasho wanaagsan ah waana ay fududahay in la daryeelo miraha - waaweyn iyo hodan ku ah fitamiinada iyo miyir-qabadka.
Dareemaha bikran waa noocyada jiilaalka. Miraha waxay u bislaadaan wakhtiga ugu horeeya qabow - bishii Sebtembar ama horraanta Oktoobar.
Ka gudubka xeerku waa suurtogal in jawi qabooban.
Haddii cimilada diiran ee gobolka sii kordhaysa uusan dheerayn, miraha waxay u bislaadaan jiilaalka oo lumiya astaamahooda.
Kala duwanaan waa skoroplodny, midhihiisu waa joogto, gaar ahaan xasillooni, caabbinta barafowga.
Dhirta Apple ee noocyada this miraha. laga bilaabo sideed ilaa toban sano.
Ugu sarreysey wuxuu ku dhacaa shanaad ilaa toddobaad ee koritaanka dhirta.
Waxaa ka mid ah noocyada jiilaalka ee geedaha tufaaxa, Golden Delicious, Aport, Antonovka caadiga ah iyo Antonovka macmacaanka, Idared ayaa sidoo kale ku raaxaysanaya caan.
Sharciga kala duwan ee Granny Smith
Ka fiirso sida gaarka ah ee tufaaxa iyo midhaha laftiisa.
Sida caadiga ah noocyada geedka tufaaxa "Granny Smith" dhexdhexaad ah waana dabiici nus-naar ah. Leeyahay taajajinta taajka.
Tufaaxu koraan waaweyn - ilaa 300 garaam qof walba. Waxay leeyihiin midab cagaaran oo qurux badan, maqaarka cufan, qaab wareegsan ama qaab yar yar leh - tan waxaa lagu arki karaa sawirka.
Iyada oo daryeel ku habboon, dhirta miraha geedka.
Mararka qaarkood dusha cagaaran ee tufaaxa waxaa ku jira dharka casaan-cas - waxay u muuqdaan dhinaca dhinaca wajiga qorraxda.
Hilibka tufaaxa waa iftiin, casiir leh, dhanaan-macaan dhadhan.
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo imisa qiyaasood oo ku jira caanaha cagaaran ee saafiga ah?
Tufaaxani waxay leeyihiin sonkor yar oo hooseeya iyo fiitamiin sare.
Maadaama maaddada kalooriga ee tufaaxaasi ay hooseeyso - 47.5 kalori, waad ku fali kartaa iyaga oo aan lahayn wax cabsi ah oo ku saabsan jilicsan. Sidoo kale la tixgeliyo hypoallergenic.
Dhadhamin weyn iyo faa'iidooyin badan oo ka mid ah miraha waxaa lagu muujiyey noocyada soo socda: Orlinka, Orlovsky Pioneer, Moscow Winter, Aromatic iyo Young Physicians.
Granny Smith tufaaxa ama caanka "Granny Smith" ayaa ka muuqday New South Wales, Australia sannadkii 1868.
Waxay yihiin alaab doorasho. geedo tufaax ah oo french french from australian.
Keenay noocyo cusub Soo-saaraha hiwaayaddaAustraliyaanka hore Anna Maria Smith.
Natiijada shaqadeeda si dhakhso ah ayey ku guuleysatay caan ku ah caalamka.
Kala sooc "Granny Smith" waxaa loola jeedaa dhexdhexaad ah.
On koritaanka iyo horumarka buuxa ee midhaha 240 maalmood oo kuleyl ayaa loo baahan yahay.
Dhirta Apple "smithy smith" ayaa gelaya fruiting ee sanadka labaad ama saddexaad ka dib markii laga beerto beertii dayrta.
Sannad shanaad ee koritaanka laga bilaabo hal geed waxay ururiyaan ilaa 15 kiilo oo dalagga ah.
Waa in la ogaadaa in Granny Smith yahay pollinator ugu wanaagsan ee dhammaan noocyo kale.
Si santuuqa sare, noocyada noocan oo kale ah waa in lagu dhex daro si uun uun noocyada jiilaalka ee geedaha tufaaxa: Golden Delicious, Elise, Ligol, Lady Pink.
Haddii aad raadineysid geedo tufaax sare leh, fiiri Aloe Early, Bogatyr, Veteran, Kuibyshev iyo Beauty Beauty.
Xaggee bay tufaaxaasi ku koraan? Maanta Granny Smith growers of all countries.
Kala duwanaanshaha dareen gaar ah furfurious: qaabka, cabbirka iyo sifooyinka kale ee midhaha iyo geedka laftiisa waxay ku xiran yihiin xaaladaha xabsiyada.
"Granny Smith" uma dulqaadan karo kuleylka. Sababtoo ah qiyaasta korodhka qorraxda miraha qalalan.
Sidoo kale fasalka ma jecla iyo qabow xoog leh: laga bilaabo heerkulka hooseeya tufaaxa leexiyo jaalaha iyo qaabka isbeddelka.
Cimilada ugu wanaagsan ee sii kordhaysa waa mid khafiif ah, diirran, jiilaal gaaban iyo waqti dheer beeraha.
Markaad beerto geed midho leh, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo arrimahan sida waqtiga iyo goobta saxda ah.
Tani waa damaanad ah in geedka tufaaxaagu uu si fiican u dhali doono, oo wuxuu ku farxi doonaa midhihiisa.
Fasaxyada - badanaa biennial - tufaaxada noocyada caanka ah ee caanka ah dhulka guga iyo dayrtamarka aanay jirin baraf.
Bil ka hor beerashada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu diyaariyo godadka geedo - carrada waa inay fariistaan. Qoryuhu waxay u baahan yihiin qoto dheer oo ku saabsan 60 sentimitir iyo dhexroor ugu yaraan hal mitir.
Ciidda waa in laga saaraa ceelka waa in lagu qaso mid kasta Bacriminta dabiiciga ah.
Ka hor inta aan la beerin godadka waxay u baahan yihiin inay ku qoyaan biyo.
Ha beeran agagaarka raspberries, laakiin leh noocyo kale oo jiilaal ah oo geedo tufaax ah, on lid ku ah, waxaa lagu talinayaa.
Ka dib markii laga beerto, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rusheeyo dhul ku filan oo biyo ah, sidaa darteed dhulka wuxuu ku habboon yahay xididdada geedaha yar yar.
Geedka dambe xiran loop to the cola.
Ka hor inta bilawga ah ee dhaxan gooyaa waxay u baahan yihiin in la diiriyoiyo ciidda u dhow geed daboolo digada.
Daawo fiidiyo ku saabsan sida iyo goorta la geynayo geed si sax ah.
Geedaha Apple loo baahan yahay sannad walba.
Gooyo taajajinta ayaa xaqiijin doonta in hore loo gooyey geedka iyo cimilada.
Gooyaa waxaa la samayn karaa laga bilaabo sanadka labaad ee nolosha geedka guga hore ilaa kelyuhu ay bararsan yihiin.
Biyaha badan ee xagaaga - Saddex ilaa afar litir oo geed ah - waa in la sameeyaa sanadaha ugu horreeya ee nolosha iyo koboca geedka.
Ka dib markii waraabiyo ciidda waxaa lagula talinayaa in mulch humus iyo carrada dabacsan iyo bacrimiya leh arrinta organic iyo macdanta macdanta.
Marka midhaha ay u bislaadaan, waraabinta waa in la dhimohaddii kale waxay jabin doonaan.
"Plus Granny Smith" oo aan la sii saadaalin Karin - iska caabinta cudurada "tufaaxa" badan iyo cayayaanka. Sidaa darteed, kala duwanaantani ma dhibayso. xayrta maqaarka.
Ka - soo - baxnaanshaha qolofka iyo xawaashka, budada xiirta.
Waxaad ku qaban kartaa iyaga fungicides: Benlaton, Fundazole, Bayleton, Bordeaux fluid iyo dawooyin kale oo badan.
Cudurada haray iyo cayayaanka ayaa saameynaya geedka tufaaxa aad u dhif ah, taas oo ka dhigaysa xulasho wanaagsan oo loogu talagalay taranta beerta. Hase yeeshe, ma dhaawacayso si ay u ilaaliso ka hortagga sida midhaha miraha ah, aboor ku qulqulaya, boodboodka macdanta, silkworms iyo cawska.
Noocyada Granny Smith waxay ku fiican yihiin inay sii kordhaan gobollada leh xilli sii kordhaya.
Waxay ka buuxsamaan fiitamiinada, sababtoo ah cabbirkooda waaweyn, waxay ku habboon yihiin isticmaalka karinta.
Sidoo kale midhaha "smith smith" muddo dheer la keydiyay oo kaliya waxay ka fiicnaanaysaa.
Geedaha kala duwan ee noocaan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa sida daaqada beerta iyo meelaha magaalooyinka ah.
Cunto wanaagsan, dhadhan fiican ee miraha iyo muuqaalka muuqaalka quruxda badan ee geedaha ayaa ka dhigan kala duwanaanta hogaaminta kuwa kale.